बझाङको थलारामा प’हि’रो जाँदा २३ जना बे’पत्ता ! – Online Khabar 24
बझाङको थलारामा प’हि’रो जाँदा २३ जना बे’पत्ता !
October 20, 2021 October 20, 2021 by admin admin
काठमाडौं : बझाङमा प’हि’रो मा परी २३ जना बेप’त्ता भएका छन् । १ गते राति थलारा गाउँपालिका वडा नं ४ डिख्लामा गएको प’हि’रो परी २३ जना ह’राएका हुन।
सो गाउँभन्दा माथि ढोगदिना भन्ने ठाँउबाट प’हि’रो जाँदा दुई गाउँका स्थानीय विस्थापित भएका छन् भने सात घर पु’रिएका छन् । बेप’त्ता हुनेमा स्थानीय गगने सार्कीका एकै घरका १८ जना र नरे पार्कीका घरका पाँच जना रहेका छन् ।
गगने सार्की रोजगारीका लागी भारतमा छन् । उनका माइला छोरा काले सार्की मात्र हाल सम्पर्कमा आएका छन् ।यति बेला प’हि’रो का कारण तल्लो डिख्ला र माथिल्लो डिख्ला गाउँका स्थानीय त्रिभुवन मावि महेन्द्रधारमा अस्थायीरुपमा आश्रय लिइरहेका छन् ।
पूरा गाउँ प’हि’रो को जो’खिममा रहेपछि सय भन्दा बढी परिवार विस्था’पित भई आफन्त र नजिकैको विद्यालयमा बसिरहेको शान्ती मावि पारा काट्नेका शिक्षक मदनबहादुर साउदले बताए ।यस्तै अविरल वर्षाका कारण गएको प’हि’रोले सुदूर पश्चिमका पहाडी जिल्लामा सञ्चार सेवा अवरु’द्ध भएको छ ।
बा’ढीले सडक अवरु’द्ध भएको र नेटवर्क नहुँदा समयमै खबर नपाएकोले उद्धारमा सम’स्या भै रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका प्रमुख डिएसपी रुपक खड्काले बताए । यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevरु’नु न हाँस्नुको अ’वस्था किसान ! पाकेर भित्राउन लागेको धान बालि बर्षाले न’ष्ट